Global News Nepal स्वास्थ्य Archives - Global News Nepal
काठमाडौं : हामीले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी साधनहरु बारेमा जानकारी लिनु जरुरी छ । आफुले प्रयोग गर्न परिवार नियोजनका साधन कस्तो किसिमको हो, कहिले बनेको हो र त्यसको प्रयोग पछि आफुमा कस्तो खाले प्रभाव वा असर पर्छ...
यी हुन् बालबालिकाको शरीरमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति निर्माण गर्न पूर्ण जीवनको लागि लाउनु पर्ने खोपहरु (खोप तालिकासहित)
काठमाडौं :बालघातक सरुवारोग कुनै सरुवा विषाणु, जीवाणुको संक्रमणबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर भएको अवस्था हो । सरुवा रोग हावा, पानी, माटो, दिसा, रगत आदिबाट एक अर्कामा सर्दछ । बालघातक रोग जस्तैः लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुषटंकार, क्षयरोग, पोलियो, दादुरा आदि...
शुक्रवार हजार भन्दा बढिको संख्यामा संक्रमणमुक्त, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस् विवरणसहित
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७६४ जनामा को'रोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ९ हजार ४ सय ६६ पीसीआर परीक्षण गर्दा ७१५ जना र १ हजार २२२ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४९ गरी ३...
के तपाई कालो चिया पिउँनु हरन्छ ? यस्ता छन् फाइदा !
काठमाडौं : अहिले काठमाडौं लगाएत हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र सबै ठाउँमा जाडो याम सुरु भइसकेको छ । हाम्रो लागि जाडोको समय, चिया त अनिवार्य नै जस्तो भइसकेको छ । तर, चियामा सबैको रोजाई एकै नहुनपनि सक्छ । कसैले कालो...
के तपाईको निन्द्रामा घुर्ने बानी छ ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं : घुर्ने बानीलाई आजकाल स्वास्थ्य समस्याका रुपमै लिइदैंन । घुर्ने मानिसलाई तत्काललाई केही असर नगरेपनि उसंगै सुतेको मानिसको निद्रामा असर पर्छ । घुराईले स्वास्थ्यमा समेत दुष्प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्तो बानीलाई कम गर्न यी उपाय अपनाउनुहोस्ः बेसारको खानेः बेसारमा...
बच्चा जन्मिएपछि तौल कसरी घटाउने ? अपनाउनुस् यस्ता उपाय
काठमाडौं : बच्चा जन्माएपछि आमाको पाचन प्रक्रियामा प्रभाव पर्न जान्छ । महिलाले गर्भावस्थादेखि डेलिभरीको समयसम्म विभिन्न समस्याको सिकार बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रेग्नेन्सी र डेलिभरीपछि प्रायः महिला मोटाउने गर्छन् । त्यसैले डेलिभरीपछि तौल कम गर्न निकै गाह्रो हुन सक्छ । यसरी...